အခုထိ မကစား ပေးနိုင် သေးတဲ့ အတွက် ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေခဲ့ရတဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာ အကြောင်း ပြောကြားလိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား - SPORTS MYANMAR
အခုထိ မကစား ပေးနိုင် သေးတဲ့ အတွက် ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေခဲ့ရတဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာ အကြောင်း ပြောကြားလိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား
မန််ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ အားထား ရတဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား ဖြစ်သူ ပေါလ် ပေါ့ဂ်ဘာ ဟာ အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ကတည်းက ဒဏ်ရာ ရရှိ ခဲ့ပြီး အခု ထက်ထိ အသင်း အတွက် ပြန် မကစား ပေးနိုင် ခဲ့သေး ပါဘူး ။
ဒါ့ကြောင့် ဒီကြား ကာလ တွေမှာ ပေါ့ဂ်ဘာ ဟာ ကြံ့ခိုင် နေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် အသင်းပြောင်း လိုတာကြောင့် မ ကစား ပေး သေးတာ ဆိုတဲ့ သတင်း တွေဟာ အတော်လေး ပျံ့နှံ့ ခဲ့ပါ သေးတယ် ။ ဒါ့အပြင် ပေါ့ဂ်ဘာ ဟာ မီယာမီ မှာ သွားရောက် ခဲ့တာ ကလည်း အဆိုပါ သတင်း တွေကို ပိုပြီး ကျယ်လောင် စေခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အက်စတွန် ဗီလာ အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ရမယ့် ပွဲစဉ် မတိုင်မီ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား က ပေါ့ဂ်ဘာ ဒဏ်ရာ ပြသနာ မှ ပြန် လာခြင်း က ကမ႓ာ့ အဆင့် ကစားသမား တစ်ဦး ပြန်လည် ပိုင်ဆိုင် ရသလို ဖြစ်နေ လိမ့်မယ် လို့ ဆိုသွား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” သူ့ဟာ ဒဏ်ရာ ပြသနာ တွေ ကနေ သက်သာ ကောင်းမွန် ဖို့ ကြိုးစား နေဆဲ ဖြစ်တာ ကြောင့် ဒဏ်ရာ ပြသနာ ကနေ ဘယ်တော့ ပြန်ကောင်း လာမလဲ ၊ ဘယ်လောက် အကြာ မှာ အသင်း အတွက် ကစား ပေးနိုင် မလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့် ကြ ရတာပေါ့ ”
” သေချာ ပါတယ် ၊ သူဟာ ကျွန်တော် တို့တွေ အတွက် တော့ ကစားသမား အသစ် တစ်ယောက် ရရှိ သလို ဖြစ်နေ ပါ လိမ့်မယ် ။ သူဟာ အခု တော့ ကျွန်တော် တို့ အတွက် မကစား ပေးနိုင် သေး ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ကစား ပေးတာနဲ့ ကမ႓ာ့ အဆင့် ကစားသမား တစ်ယောက် ခေါ်ယူ ရရှိ သလို ဖြစ်နေ ပါ လိမ့်မယ် ။ ကျွန်တော် တို့ဟာ သူ့ကို တက်နိုင် သမျှ အမြန်ဆုံး ပြန်ရ ချင်ကြ ပါတယ် ”
” ကစားသမား တိုင်းက ဒဏ်ရာ ရရှိ နိုင် ပါတယ် ။ ဒီအတွက် ပေါလ် ကတော့ ပြန်လာ နိုင်ဖို့ အလုပ် ကြိုးစား နေခဲ့ ပါတယ် ။ သူ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆန်တာ ကို ဘယ်သူ မှ သံသယ ဖြစ်ဖို့ မလို ပါဘူး ။ သူဟာ ဘောလုံး ကို အရမ်း ကစား ချင် နေတဲ့ ကမ႓ာ့ အကောင်းဆုံး ကွင်းလယ် ကစားသမား တစ်ဦး ပါပဲ ”
” သူ မပါဝင် နိုင် ခဲ့တဲ့ အချိန် တွေမှာ ကျွန်တော် တို့ သူ့ကို လွမ်းဆွတ် ခဲ့တာ အသေအချာ ပါပဲ ။ အခြား ကစားသမားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ တော်မီနေး နဲ့ ဖရက်ဒ် တို့က သူ မရှိ တဲ့ အချိန် တွေမှာ အကောင်းဆုံး ကြိုးစား ကစား ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ ပြန်လာ နိုင်ခြင်း က ကျွန်တော် တို့ အတွက် တစ်ကယ့် ကို အားတက် စရာ ပါပဲ ” လို့ ဆိုးလ်ရှား က ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ မနက်ဖြန် မှာတော့ အက်စတွန် ဗီလာ အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား ရဖို့ ရှိနေ ပြီး နောက် တစ်ပါတ် မှာတော့ နည်းပြ ဟောင်း ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ရဲ့ တော့တင်ဟမ် ဟော့ စပါး အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား ရပါ လိမ့်မယ် ။ ပေါ့ဂ်ဘာ ဟာ အဆိုပါ ပွဲတွေ မှာ ပါဝင် နိုင် မလား လို့ အမေး ခံလိုက် ရတဲ့ အချိန် …
” ဒီ တနင်္ဂနွေ လား ? နိုးပါ ။ စပါး ပွဲလား ? ကျွန်တော် အခုတော့ မပြော နိုင်သေး ပါဘူး ။ ကျွန်တော် အိမ်မှာ နေပြီး သူ့ကို လိုက်ကြည့် နေတာ မဟုတ်ဘူး လေ ။ သူ ပြန်လာ ပြီး လေ့ကျင့်ရေး တွေကို လုပ်ဆောင် ပြတဲ့ အခါ ကျမှ သူ့ရဲ့ အနေအထား တွေ ဘယ်လို ရှိနေ သလဲ ဆိုတာ ပြောနိုင် ပါ လိမ့်မယ် ” လို့ ဆိုးလ်ရှား က ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။